ओलीले हुन्न हुन्न भन्दाभन्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले यस्तो काम गरे, अब के होला यसको परिणाम ? – GALAXY
ओलीले हुन्न हुन्न भन्दाभन्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले यस्तो काम गरे, अब के होला यसको परिणाम ?
नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको बिशेष पहलमा मुख्यमन्त्री बनेका भीम आचार्यले उनकै कुरा सुन्न छाडेका छन् । प्रदेश १ मा आफ्ना मान्छेलाई मन्त्री बनाउन पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दिएको निर्देशन मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले अवज्ञा गरेका छन्।
शुक्रबार आफू निकटका दुई जनालाई मन्त्री नियुक्त गरेका मुख्यमन्त्री आचार्यलाई अध्यक्ष ओलीले फोन गरेरै संखुवासभाका सांसद तुलसी न्यौपानेलाई नियुक्त गर्न निर्देशन दिएका थिए। आचार्यले न्यौपानेलाई सपथ गराउन इन्कार गरेका हुन्।